Shailene Woodley Sawirro Qaawan iyo Muuqaallo Galmo Isku Duwidda - Diiwaanka Filimka Caanka Ah
Shailene Woodley Sawirro Qaawan iyo Muuqaallo Galmo Isku Duwidda
Atariishada kulul iyo Model Shailene Woodleyqaawan, muuqaalo galmo iskudhaf ah iskudubarid iyo sawiro ay sameysay sanadihii lasoo dhaafay ayaa halkan jooga! Hottie-kani wuxuu tusay bisadaheeda, xubinta taranka haweenka wuxuuna lahaa xoogaa daqiiqado shucuur xamaasad leh tan iyo markii ay bilawday inay ka soo muuqato filimada waaweyn ee la magacaabay iyo taxanaha! Laakiin tan ugu muhiimsan, gabadhani waxay noqotay riyada qoyan ee rag badan!
Shailene Woodley (Da'deedu tahay 28) waa jilaa Mareykan ah, soosaare filim ah, isla markaana u dhaqdhaqaaqda. Woodley wuxuu bilaabay inuu matalo doorarka yar yar ee telefishanka. Waxay markii ugu horreysay caan ku noqotay doorkeeda jilaaga ah ee Amy Juergens ee taxanaha 'Nolosha Sirta ee Dhallin-yarada Mareykanka' (2008–2013). Kadib waxay filimkeedii ugu horreeyay ka sameysay ‘The Descendants’ (2011). Oo wuxuu sii waday inuu jilo filimka da'da ee 'The Spectacular Now' (2013). Iyada darteed, waxay heshay magacaabis loogu talagalay Abaalmarinta Dahabiga ah ee Abaalmarinta Atariishada ugu Wanaagsan waxayna ku guuleysatay. Waxay ku guuleysatay caan kaalinteeda ka mid ah bukaanka kansarka dhallinta yar ee riwaayadda jacaylka ah 'Dhibaatada Xiddigaheena'. Iyo saynis-fi 'Taxanaha Kaladuwana'. Laga soo bilaabo 2017 ilaa 2019, Shailene kulul waxay ciyaartay badbaaday faraxumeyn taxane ah ' Beenta Yar Yar ‘, Taas oo loogu magacaabay Abaalmarinta Emily Primetime iyo Abaalmarinta Dahabka Adduunka.
New Shailene Woodley muuqaalo qaawan oo laga keenay ‘Dhammaadka, Bilowga''
Halkan waxaa ah Shailene Woodley oo la soo saareysa nin isla markaana ku soo gabagabeyneysa sarre. Shailene ayaa gacanta ninkaan u saareysa goonideeda si ay farta ugu fiiqdo. Ninka ayaa markaa ka siibay surwaalkeeda oo way galmoodaan. Woodley waxay muujineysaa in badan oo ka mid ah timaheeda qaawan, maaddaama ay dhabarka miis ugu dhammaato.
Muuqaalka xiga, Shailene Woodley waa qaawan tahay markale, maadaama ay lasocoto nin. Dabaqa ayuu ka siibay, surwaalkeedii iyo saraawiisheedana wuu ka siibay. Shaadhkeeda ayaa markaa soo baxaya waxaanuna aragnaa rajabeetadeeda, burooyinkeeda ayaa soo baxa. Way xun yihiin oo markaa waxaan aragnaa xoogaa burooyinkeeda ah, markay dhabarka u jiifto.
Hottie Shailene Woodley waxay fadhisaa kursiga hore ee gaariga habeenkii iyada iyo ninkeeda. Waxay na siineysaa aragti ah tigaheeda qaawan, maadaama ay ku dhammaato dhabta dhabta ah ee ninka oo galmo sameyneysa.
Shailene Woodley qaawan & muuqaallo jinsi ah
Shailene Woodley waxay na siisay xoogaa qaawan oo qaawan iyo muuqaalo galmo muuqaaladeedii ugu dambeeyay ee taxanaha iyo filimada. Waxaan rajeyneynaa inay ka soo muuqato muuqaalo badan oo kulul. Waxaan jecel nahay hottie-gaan yar, wejigeeda macaan, iyo tiga yaryar!
Ku raaxeyso daawashada fiidiyowga oo booqo mid kale Ceelka porn waxaan dhajinaynaa maalin kasta!
''Shimbir Cadaan ah oo ku jirta Dabeyl''
Shailene Woodley topless waxay fadhidaa sariir nin agtiisa ah. Waxay hoos u dhigeysaa dusheeda si ay u muujiso labada buugeed, iyadoo na siineysa aragti dheer naaskeeda maadaama timaheeda ay ka dul dhacayaan midka kale. Kadib waxay u foorarsataa inay dhunkato ninka.
Kadib muuqaalka kore, waxaan leenahay Shailene Woodley muuqaal galmo qaawan. Waxay dhunkaneysaa ninkeeda, waxay ka siibtaa surwaalkeeda ka dibna sariir ayey la dhigtaa ninka. Waxaan ka arkeynaa jirkeeda oo qaawan dhinacaa iyadoo uu saaran yahay ninka dusheeda sida iyada iyo ninka ay isu galmoonayaan.
Iyo hal muuqaal oo qaawan oo kale, halkaas oo Shailene oo jilicsan ay dhex taagan tahay musqul ay ku duuban tahay shukumaan iyada oo muraayadda isku eegaysa. Kadib waxay banaanka soo dhigeysaa boobkeeda waxayna eegaysaa nafteeda oo aan culeys lahayn. Woodley wuxuu maqlaa qof albaabka jooga oo si deg deg ah ayuu u daboolaa.
Shailene Woodley ayaa mar kale muujineysa jirkeeda aan dusha sare lahayn. Kadibna waxaa lagu qabtay nin sariir saaran, shaatigeedii casaanka ahaa ee la hubiyey oo la jiiday iyo jiiniskeeda sidoo kale, illaa ay si dhakhso leh u daboosho.
Shailene Woodley ayaa la arkay iyada oo sariir ku fadhida oo shaatigeeda jiidanaysa si ay u muujiso rajabeeto. Waxay dib ugu seexdeen sariir Shailene waxay iska qaadaysaa rajabeetadeeda, iyadoo tusaysa bisadaheeda qaawan. Waxay u galmooddaa ninka, hoostiisa jiifa.
Shailene Woodley waxaa lagu arkaa nin sariirtiisa dul saaran, iyadoo dameerkeeda qaawan ka muuqata. Iyo waliba boobkeeda. Kadib waxay u galmooddaa ninka, iyadoo fuushan isaga oo fiirinaya laptop-ka qolka oo dhan.
'Beenta Yar Yar'
Shailene Woodley ayaa markii ugu horreysay la arkay iyadoo ordaya meel xeeb ah iyadoo wadata dhar buluug ah oo hal garab ka baxsan. Naasaheeda ayaa ka soo baxaya, maaddaama ay qunyar socod ku socoto. Waxaan markaa aragnaa iyadoo wejigeeda jiifa sariir iyadoo dameerkeedu qaawan yahay oo si muuqata u muuqda ka hor inta uusan ninku ku darin dharkeeda. Ugu dambeyntii, waxaan ku aragnaa mar kale xeebta, markan fiidkii.
Xeebtan ayaa heshay Shailene! Woodley ayaa la arkay iyadoo dharka iska siibaysa iyadoo u socota mowjadaha xeeb. Muujinaya dabada qaawan, sida ay u qaawan tahay.
Markaa waxaan haysannaa Shailene Woodley oo qaawan oo dul fadhida dusha sare ee doonta. Waxay muujineysaa xoogaa dhinac ah iyo badhida. Woodley ayaa markaa dib jiifta, iyadoo muujineysa naaso qaawan sida ay ku bilaabmayso roobku.
Shailene Woodley bikini iyo cagaha sawirada
Horaan u idhi waxaan jeclahay gabadhan, oo kaliya wax walba u samaynaysa si ay nooga dhigto farxad iyo adag. Waxaan kuu soo bandhigeynaa qaawanaanta Shailene Woodley iyo sawirada sawirada kacsiga leh ee ay u sameysay majaladaha iyo warbaahinta bulshada! Naagtee!
Lana del rey video galmada
meghan markle, qaawan
Paris Hilton xiisaha Toob Ah